Madaxweynaha Falastiin oo booqdey dhulka Yahuuda
WARIYAHA CAALAMKA GAROWE ONLINE
Posted On 29-12-2021, 03:55PM
Wadahadalo ayaa lagu waramay in uu la yeeshay wasiirka difaaca Israa'iil, Benny Gantz.
TEL AVIV, Israel - Madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa wuxuu wadahadalo la yeeshay wasiirka difaaca Israa’iil Benny Gantz kadib booqasho naadir ah uu ku tagay dhulka Israa’iil.
Bayaan ay soo saartay Talaadadii, wasaaradda difaaca Israa’iil ayaa lagu sheegay in “labada nin ay ka wadahadleen amniga iyo arrimaha madaniga ah” intii uu socday kulanka, kaas oo warbaahinta Israa’iil ay sheegtay in uu ka dhacay guriga Gantz ee Rosh Ha'ayin ee bartamaha Israa’iil.
Gantz wuxuu u sheegay Cabbaas inuu damacsan yahay inuu "sii wado kor u qaadista ficilada lagu xoojinayo kalsoonida dhinacyada dhaqaalaha iyo rayidka, sida lagu heshiiyey kulankoodii ugu dambeeyay", ayaa lagu daray bayaanka.
Dabayaaqadii Ogosto, Gantz wuxuu booqday xarunta maamulka Falastiin ee magaalada la haysto ee Daanta Galbeed ee Ramallah si uu wadahadal ula yeesho Abbas. Waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay oo rasmi ah oo heerkan oo kale ah muddo dhowr sano ah.
Dhanka kale, Xamaas oo ah kooxda maamusha marinka Gaza ee la go’doomiyay ayaa cambaareysay wadahadalka Gantz iyo Cabbaas, iyagoo sheegay in kulanka uu lidid ku yahay “ruuxa qaranka ee shacabka Falastiin”.
Af hayeenka Xamaas, Qassem, ayaa intaa ku daray in hab-dhaqanka hoggaanka maamulka Falastiin ay "sii qoto dheerayn doonto kala qaybsanaanta siyaasadeed ee Falastiiniyiinta oo ay adkaynayso xaaladda Falastiin".
Xisbiga mucaaradka ah ee Israa'iil ee Likud ayaa sidoo kale wuxuu dhaleeceeyay kulanka, isagoo sheegay in "tanaasulaadyada khatarta ah ee ammaanka Israa'iil ay ahaayeen oo kaliya arrin waqti ah".